Ny fanakorontanana amin'ny automatisation marketing | Martech Zone
Raha vao nanoratra momba ny lasa, ankehitriny ary ho avy ny marketing, sehatra iray ifantohana ny automatisation marketing. Niresaka momba ny tena fizarazarana ny indostria aho.
Misy ny vahaolana farany ambany izay mitaky anao hampifanaraka ny fizotrany mba hahomby. Tsy lafo ireo… vola be an'arivony dolara isam-bolana ary mitaky anao hamerenana amin'ny laoniny ny fomba fiasan'ny orinasanao hampifanaraka ny fomba fiasa. Mino aho fa mitera-doza ho an'ny orinasa maro ity… izay mahomby satria ny fizotrany nanana niasa lavitra lavitra.
Ny vahaolana avo lenta dia manolotra fanalefahana sy fanaingoana taonina, saingy mahery setra ny fampiharana azy. Indraindray dia mitaky asa mandritra ny volana maro ary na dia fandaharam-pianarana sy fitantanana manokana aza. Miara-miasa amin'ny orinasa maromaro nahazo alalana izahay automation marketing vahaolana, saingy mbola tsy nampihatra sy nanararaotra ny teknolojia. Ka… mandoa vola be ry zareo, nefa tsy mahatsapa ny mety hitranga.
Miorina amin'ny Interactive manelingelina ny tsena (indray). Right On Interactive dia efa nantsoina ho orinasa mpanamboatra varotra fironana avy amin'i Gleanster - miaraka amin'ny fampiharana haingana indrindra sy ny interface mora indrindra. Izy ireo dia manova ny fomba ahafahan'ny orinasa mandray ny paikadim-barotra amin'ny fiainana andavan'andro.
Miorina amin'ny Interactive ankehitriny mamela ny orinasa hiditra amin'ny tsenan'ny automatisation marketing amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny fahasarotany. Raha tsy manana paikady izy ireo dia afaka manomboka amin'ny a fototra fonosana. Raha nahay ny marketing amin'ny mailaka izy ireo ary vonona ny hanao marketing mitarika sy mitete, dia afaka mifindra na manomboka automatique. Ary raha vonona hampiasa tanteraka ilay lampihazo izy ireo dia afaka mihetsika na manomboka tsingerim-piainana barotra.
Ity misy fihenan'ny Miorina amin'ny Interactive fonosana:
Basic - mailaka, pejy fitobiana ary fitaovana fanoratana, tatitra momba ny mailaka sy fanaraha-maso ny mailaka, mpanamboatra fizarana, an-tsokosoko an-tranonkala, tatitra momba ny mpitsidika tsy fantatra anarana, tatitra momba ny mpitsidika voamarina ary tatitra mitarika.
automatique - Ho fanampin'ny Basic, ampio ny Analytics ara-tsosialy sy ny fanaovana tatitra, ny programa marketing ho azy, ny tatitra momba ny programa marketing, ny fahitana amin'ny CRM ary ny mpitantana fahombiazan'ny mpanjifa voatokana.
Lifecycle - Ho fanampin'ny endri-javatra rehetra an'ny Basic sy ny automatique, ny Marketing Lifecycle, ny Lifecycle Staging ary ny Criteria amin'ny vavahady, ary ny isa 3D.
Ny tena tsara indrindra, ny fonosana fototra dia tsy dia lafo loatra noho ireo mpivarotra tokana misongadina ao amin'ny indostria. Tsy mila mifindra monina amin'ny mpivarotra iray mankany amin'ny iray hafa - avelao any aoriana ny fahalalan'ny mpanjifa azo ampiharina. Miaraka amin'ny Right On Interactive dia efa misy ny angona rehetra, mamela ny endri-javatra bebe kokoa izy ireo rehefa miakatra amin'ny fonosana manaraka ianao.
Ity misy topy maso ny amin'ny fomba Miorina amin'ny Interactive Samy hafa
Disclosure: Miorina amin'ny Interactive dia mpanohana an'i Martech Zone, mpanjifan'ny DK New Media (namokatra ny horonantsary izahay), ary mpanjifanay izahay!
Tags: Scoring 3dCRMmarketing amin'ny fiainana andavanandron'ny mpanjifamailaka Marketingtatitra momba ny mailakaemail trackingfitaovana endrikatenyfitarihana mafanafiantsonana pejyMarketing amin'ny fiainana andavan'androfizarana tsipika fahavelom-bolomahitsy amin'ny interactiveROIsalesforceampahanysegmentationfanadihadiana ara-tsosialytatitra nataon'ny mpitsidikaMalagasy Analytics